Somaliland oo Xabsiga Dhigtay Siyaasi Maamul Goboleed Ku Dhawaaqay [DAAWO] | SAHAN ONLINE
Somaliland oo Xabsiga Dhigtay Siyaasi Maamul Goboleed Ku Dhawaaqay [DAAWO]
Hargaysa –Maamulka Somaliland ayaa xabsiga dhigay siyaasi ku dhawaaqay in maamul goboleed uu isagu madax u yahay uu ku dhawaaqi doono haddii ayan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi talaabo ka qaadin rag uu ku eedeeyay inay Imaraadka ka iibiyeen Magaaladda Berbera.
Siyaasigan oo lagu magacaabyo Saleebaana Ibrahim Maxamuud ayaa ku eedeeyay wiil uu sodog u yahay Madaxweynihii hore ee Somaliland oo lagu magacaabyo Bashe Morgan, ahna safiirka Somaliland u fadhiya dalka Imaaraadka iyo wasiirka arimahan dibada Sacad Cali Shire, in ay magaalada Berbera ay ka gadeen dalka Imaaraadka iyada oo uu si gaar ah farta ugu fiiqay hay’adii ay dhawaan ka diwaan gashadeen dalka Imaaraadka iyo sidoo kale shirkada DP World.
Waxana uu siyaasiga sheegay hadii uu madaxweyne Muuse Biixi uu todobaad gudahii wax kaga qaban waayo arimahan uu dareenkiisa Ka bixiyay in uu dhisi doono xukumadd uu ugu yeerr doono Saaxil State oo caasimadiisuna noqon doonto magaaladda Berbera,taasi oo uu sheegay in uu isagu madaxweyne Ka noqonayaa doono.
Maalmihii u dambeeyay waxaa Somaliland ka taagnaa muran ka taagnaa shirkad la sheegay in loogu talagalay in Somaliland u soo jiido maalgalin iyo mashaariic, taasi oo fadhigeeda laga dhigay Dubai, Imaraadka carabta. Shirkadan ayaa la sheegay in ku diiwangashan tahay magaca shaqsiyaadka, inkastoo wasiirka arrimaha diba uu sheegay in dowladda Somaliland ay leedahay shirkadaasi.